विधर्मी आतकवादि रोहिंग्या मुस्लिमहरु दिन प्रतिधिन काठमाडौमा बढ्दै, गृहमन्त्रालय के गर्दै छ? कि डलरका खात लागेर चुप छ सरकारी निकायहरु? - Suvham News
विधर्मी आतकवादि रोहिंग्या मुस्लिमहरु दिन प्रतिधिन काठमाडौमा बढ्दै, गृहमन्त्रालय के गर्दै छ? कि डलरका खात लागेर चुप छ सरकारी निकायहरु?
September 19, 2017 by gsmktm
सर्वप्रथम नेपालका केहि मिडिया हाउसहरु रोहिंग्या आतकवादिहरुले दुख पाय सरण देऊ भन्दै घुमाउरौ पाराले तस्विर समाचार प्रसारण गरिरहेका छन यसको पछाडि अरु केहि नभयर डलर भयको प्रमाण दिरहनु पर्दैन?
म्यान्मार (बर्मा) का घटनाक्रम तथा रोहिंग्या मुस्लिमहरुबारे नेपालका समाचार माध्यममा निकै सामग्रीहरु प्रकाशन / प्रसारण हुन थालेको देखिन्छ । ती सामग्रीमा म्यान्मार (बर्मा) को रैथाने बौद्ध समुदायको नकारात्मक छवि र रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न खोजेको देखियो । रोहिंग्या मुस्लिम समुदायबारे नेपाली जनमानसमा सहानुभूति जगाई नेपालमा रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरुलाई ठूलो संख्यामा शरण दिलाउने उद्देश्यले समाचार, रुपक (फिचर) एवं वैचारिक लेखहरु प्रकाशन प्रसारण गर्न थालिएको देखिन्छ । संसारमा जहाँकहिँ पनि अशान्ति हुनु राम्रो होइन; तर, बौद्ध समुदायको नकारात्मक र रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको सकारात्मक छवि निर्माणको औजार नेपाली मिडिया बन्नु चिन्ताको कुरा हो । नेपालले विधर्मी समुदायका शरणार्थीको बोझ धान्न सक्दैन भन्ने तथ्य सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ ।
राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन् ।
Prevसंविधान दिवसको सन्दर्भमा
Nextचाडपर्वमा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा